ထုံဆေး၊ မေ့ဆေး (Anesthesia) ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များ - Hello Sayarwon
ထုံဆေး၊ မေ့ဆေး (Anesthesia) ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်များ
နှစ်တိုင်း ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်တွေ ပိုပို လုပ်လာရပါတယ်။ လူတွေကို ကုသဖို့ချည်းပဲတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကုသနေစဉ် နာကျင်မှုနဲ့ သက်တောင့်သက်သာမရှိမှုတို့ကို လျော့ကျစေဖို့ပါ ပါဝင်လာပါတယ်။ ကုသမှုအားလုံးနည်းပါးအတွက် နာကျင်မှုသက်သာစေဖို့ ဘေးကင်းပြီး ထိရောက်တဲ့ Anesthesia ကို ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။
Anesthesia ဆိုတာ ဆေးကုသနေစဉ် နာကျင်မှုသက်သာစေတာနဲ့ သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်မှုကို လျော့ကျစေတာ၊ အဲ့၂ခုအတွက် ဆေးကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းပါပဲ။ Anesthesia အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ သင်သတိရှိနိုင်သလို သတိမရှိတာလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေနဲ့ သင့်ပြုလုပ်ရမယ့် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ Anesthesia အဓိက၃မျိုးထဲက တစ်ခုကို အသုံးပြုရမှာပါ။
ဒီအမျိုးအစားက သင့်ကို ကုသနေစဉ် သတိမေ့နေစေမှာပါ။ သင့်ဘေးနားမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်သလို ဘာနာကျင်မှုကိုမှလဲ ခံစားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီအမျိုးအစားက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု နာကျင်မှုကို တားဆီးပေးတာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် Epidural ( ခါးအောက်ပိုင်း ) နဲ့ Spinal ( ကျောရိုး ) ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်။ Epidural ကတော့ ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာ မကြာခဏ အသုံးပြုပါတယ်။
ဒီအမျိုးအစားက သင့်ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးကို ထုံသွားစေတာပါ။ ဆရာဝန်တွေက ဒါကို အသေးစား ကုသမှုတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ ကုသနေစဉ်မှာ သင်ဟာ နိုးနိုးကြားကြား ရှိနေမှာပါ။
Anesthesia ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်
Analgesia နာကျင်မှု သက်သာစေခြင်း
Anesthesia ရဲ့ အဓိက အသုံးဝင်ဆုံး အသုံးပြုပုံပါ။ ခွဲစိတ်ခြင်းနဲ့ ရောဂါအမည်ရှာဖွေခြင်းလိုမျိုး တချို့ကုသမှုတွေဟာ လူနာတွေကို အတော်နာကျင်စေပါတယ်။ ဒိကိစ္စတွေမှာ Anesthesia ကို အကိုက်ခဲပျောက်ဆေးလိုမျိုးအသုံးပြုပြီး နာကျင်မှုမခံစားရစေပဲ တည်ငြိမ်စေပါတယ်။
Amnesia ကုသမှုအကြောင်း မမှတ်မိခြင်း
တချို့လူနာတွေအတွက် တချို့ကုသမှုတွေဟာ အတော်ဆိုးရွားတဲ့ အတွေ့အကြုံပါပဲ။ ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ မမေ့နိုင်လောက်အောင်ပါ။ ဒီအကြောက်တရားက သူတို့ကို ခွဲစိတ်မှုအပေါ် ကြောက်ရွံ့စေပါတယ်။ ကုသမှုကို ထိတ်လန့်သွားမယ်ဆို နောင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာတောင် ကုသချင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။Anesthesia က အဲ့လိုလူတွေကို သူတို့ကုသမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတစ်ခုမှ မမှတ်မိအောင် ပြုလုပ်ပေးပြီး ကုသမှုကို ခံယူနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
လူနာတွေဟာ ခွဲစိတ်မှုအတွင်း သတိရှိမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အပြုအမူတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ လူနာအတွက်နဲ့ ဆရာဝန်အတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ခွဲစိတ်မှုတွေအတွက် လူနာဟာ သတိမေ့ပေးရပါမယ်။ အသိ၊ သတိ၊ လှုပ်ရှားမှု၊ ခွဲစိတ်မှုအကြောင်းမှတ်ဉာဏ်၊ ဘာတစ်ခုမှ မရှိရပါဘူး။
ကြွက်သားပြေလျော့ခြင်းကလည်း ခွဲစိတ်မှုမှာ အရေးကြီးပါတယ်။ တခါတရံ ကြွက်သားအုပ်စုတွေက မထိန်းချုပ်နိုင်ဘဲ ရုတ်တရက် အကြောဆွဲတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရုတ်တရက် တင်းကျပ်စွာကျုံ့သွားပြီး တောင့်တင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူနာကို နာကျင်စေပြီး ဆရာဝန်အတွက်လဲ ခွဲစိတ်ဖို့ ခက်ခဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Anesthesia က ဒီအခြေအနေတွေကို ကာကွယ်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။
Anesthesia က အံ့ဖွယ်ပါ။ သူက ကုသမှုတွေကို ပိုမိုထိရောက်စေပြီး ပြည့်စုံစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနဲ့ ဂရုတစိုက် ဆွေးနွေးပြီး သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို အမြင့်ဆုံးရစေမယ့် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
Muscle Relaxants. http://www.webmd.com/back-pain/muscle-relaxants-for-low-back-pain. Accessed October 9, 2016.
Types of Anesthesia and Your Anesthesiologist.
http://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/surgical_care/types_of_anesthesia_and_your_anesthesiologist_85,P01391/. Accessed October 9, 2016.
Anesthesia. https://medlineplus.gov/anesthesia.html. Accessed October 9, 2016.